10 Most dzokubika Train Stations In Spain | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Spain > 10 Most dzokubika Train Stations In Spain
Kune vakawanda dzinonakidza uye kushingaira chitima nenhepfenyuro muSpain. Uchawana kumhanya, svikiro daro, zvenharaunda, yemo uye hotera-chitima afambe munyika. Kubva guru ano pazviteshi kuti madiki vane vakapoteredzwa muzvarirwo, izvi 10 wokuSpain vanofanira Uchiona Zvinhu Dzidzisai Stations.
Barcelona, Speini (Sants Train Station)
Chiteshi ichi chemazuva ano ndechimwe chiteshi chechitima chakanyanya muBarcelona. Ndicho mukuru chiteshi nokuti zvose National uye dzakawanda chitima kwokubatana. chiteshi Izvi zvakarurama guru uye riri mukati meguta centre. Rinoshandiswa nevanhu veko uye vashanyi uye achaita batanidza iwe nevakawanda chitima dzemapurisa mhiri Spain.
Madrid (Portti Atocha Train Station)
chiteshi ichi ndicho guru muMadrid uye kwave kumativi kwemakore akawanda. Chinhu yakanaka chiteshi uye ndeimwe dzokubika Train Stations, kuti dzimba wakanaka dzinopisa bindu uye hamba tsvene mukati. On Kurume 11, 2004, rimwe zuva ikozvino kuzivikanwa muSpain 11-M, 191 vanhu vakaurayiwa dzakatevedzana kubhombiwa. Neakatanga mana Republic nezvitima zvose chiteshi ichi uye pedyo.
Santa Justa ndiye yemapurisa yechitatu-Neine Basa Chaizvo kuSpain, nehama dzinokwana gumi platforms. Zvinonzi zita pashure mumwe kufarira vatsvene Thiruvananthapuram raMwari (hanzvadzi Santa Rufina). Chivako iri riri kuMabvazuva chikamu Thiruvananthapuram kuti peguta. The akavaka yakachena uye magadzirirwo muenzaniso mazuvaano veguta zvirongwa 1991.
Pyöreä Railway Station
Pyöreä anonzi rimwe ramaguta yakaisvonaka kwazvo Spain. Izvi kusarudza Spanish rinonakidza Train Stations iri anoratidza ichi, uye zvechokwadi anofanira-kuona. The chiteshi rakavakwa shure 1892, zvisinei, rakachengetedzwa yoku- unoshamisa vakaramba mumakore. The chiteshi richiri "Anglo" kana yaitonga Indian Kutarira zvazvo. Huni-masa kanopi zvinotsigirwa pambiru simbi yakabikwa zvakatevedzana zviri pedyo papuratifomu.
Puebla of Sanabria Train Station
chiteshi ichi riri muguta rakanaka yekare Zamora. Zviri imwe yakakurumbira chitima nenhepfenyuro kuSpain pamusana kunaka kwaro riri nokuda kwematunhu uye netsika mapurani, pamwe pabhodhi rooves, ashlar matombo uye hombe nechepakati Arch anotungamirira. chiteshi Izvi zvakare inozivikanwa chakakoshera rakanga riri Ruta the Plata somunhu kubatana nzvimbo.
chiteshi ichi riri muguta Zamora muna Castile uye Leon uye anoonekwa kuti chimwe chezvinhu Uchiona Zvinhu Dzidzisai Stations ndamboita. kuvaka Its raifanira akambomira 1929 uye pakupedzisira yakapera 1958. It ane dzevakawanda Renaissance rakafuridzirwa nevamwe mashoko kuti chiyeuchidzo kunonoka Gothic Style. It chaizvo kufema-kupinza.
Estação del Norte Train Station
chitima ichi chezvitima zvinogona kuwanikwa mutaundi San Sebastian, nzvimbo yakanaka kupa zvose incredible gungwa uye gomo maonero. chiteshi ichi ndicho chinhu chinoyevedza pachako sezvo kanopi kufukidza platforms yakanga yakagadzirwa naGustave Eiffel ndiani chaizvo chete munhu uyo ​​akasika Eiffel Tower muFrance.
Canfranc Estação Train Station
Izvi vakasiya Sarudza rinonakidza Train Stations inogona kuwanikwa pamuganhu pakati Spain uye Furanzi. Chakazarurwa 1928 uye zita rokuti "Titanic of Mountains."Rakanga rakavakwa kuti vaonekere kutengeserana pakati penyika mbiri asi pashure haana akaramba uye kwakaregwa kubva 1970. The chiteshi ari richidonhera zvidimbu nhasi. Vashanyi vachiri kukwanisa kuona akafanana sei huru yaiva kwayo zuva. vashanyi More Spanish vakashanyira nzvimbo kubva 2013. Kupfuura nhamba yevanhu nokusingaperi akashanyira yemapurisa apo yakanga yakashama.
Ndiro huru chiteshi muguta Valencia. It yakavakwa 1917 uye akava chiratidzo European modernist mapurani. Chinhu chikuru chivako guru wachi uye gondo chivezwa pakati, izvo vamwe nhasi kupfuura mumiririri zvinhu ravarwi. Sarudza ichi rinonakidza Train Stations riri achinzi kuvaka Cultural Interest.
chiteshi ichi riri mune repamusoro chikamu Algeciras uye makiromita mashoma kubva pachiteshi nokuda kare chinodiwa kuti airevesa aifanira kuva kubva siyana Gibraltar 100-tani kanoni. chitima ichi rinoshandiswa nevanhu vangada kushanyira Dombo Gibraltar. Wakatanga yakavhurwa 1982 uye achine akare-chikoro Anotarira kunzwa kwairi.
Nepo pane inoverengeka uchishanda Spain nhasi, izvi 10 wokuSpain vanofanira zvinonakidza chitima dzemapurisa kushanyira. Chitima kufamba chakakura chikamu mabhazi maitiro munyika uye anomhanya zvakanaka mhiri bhodhi. Kune akawanda wakanaka zuva nzendo naizvozvowo pamusoro-usiku adventures kuti akanga nechitima uye zvinokosha kwako apo kushandisa munjanji kana iwe kushanyira Spain.
Find akanakisisa uye yakachipa pashiri matikiti mu Europe Save A Train, Zvinotora 3 maminitsi zvino bhuku chitima tikiti pamusoro Kuponesa Train. kusvikira kurutivi ruri dzokubika Train Stations kuSpain, Bhadharai kushandisa muripo zvose dzakakurumbira nzira kusanganisira, kadhi uye Paypal.
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/10-fascinating-train-stations-spain/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code
europeantravel nezvitima Chiteshi chechitima famba travelspain